प्रयोग गर्दागर्दैको माइक्रोएसडी कार्ड बिग्रियो? त्यसोभए यसरी रिपेयर गर्नुस् माइक्रोएसडी कार्ड - Technology Khabar
» प्रयोग गर्दागर्दैको माइक्रोएसडी कार्ड बिग्रियो? त्यसोभए यसरी रिपेयर गर्नुस् माइक्रोएसडी कार्ड
काठमाडौं । तपाईँसँग स्मार्टफोन छ भने पक्कैपनि तपाई माइक्रोएसडी (मेमोरी) कार्डको पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ । किनभने यसमा धेरै डाटाहरु राख्ने गरिन्छ । कार्डमा धेरैजसो मानिसहरु फोटो, म्युजिक, भिडियो आदि राख्ने गर्दछन् । तर कयौपटक कार्ड पुरानो हुने बित्तिकै कार्डमा समस्या देखिन थाल्छ । जस्तो कहिले यो डिटेक्ट गर्दैन , कहिले फाइल ओपन हुँदैन आदि । त्यसबेला हामी कार्ड बिग्रीएको भन्ने सोच्दछौं, अनि नयाँ कार्ड किन्ने सुर गछौं ।
तर स्मरण रहोस मेमोरी कार्ड कहिल्यै छिटै बिग्रँदैन् । यदि कार्डमा केहि खराबी आयो भने पनि तपाईँ केहि स्टेपमा नै यसलाई सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ । र पछि पनि हामी यहि दोहोर्याउन सक्छौं । याद रहोस स्क्यानडिस्कको माइक्रोएसडी कार्डमा लाइफ टाइम वारेन्टी रहेको हुन्छ । यदि यस कार्डमा केहि समस्या आएमा सर्भिस सेन्टरमा फ्रिमा बदल्न सक्नुहुन्छ ।
यदि तपाईँको मेमोरीकार्डमा समस्या आइरहेको छ भने पहिलो काम हो डाटा ब्याकअप लिने । यदि तपाईँको फोनमा कार्ड डिटेक्ट गरीरहेको छैन भने तपाई एक दुई अरु कम्प्युटरमा यसलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ डिटेक्ट गर्दछ । किनकि तपाई यदि कार्ड रिपेयर गराउन जाँदै हुनुहुन्छ भने डाटा नस्ट हुन सक्दछ । त्यसैले कार्ड ब्याकअप गर्न नभुल्नुस् ।
यदि मोबाइलमा कार्ड डिटेक्ट भइरहेको छैन तर कम्प्युटरमा डिटेक्ट भइरहेको छ भने पहिला फोनमा डाटा ब्याकअप लिएर त्यसलाई फम्र्याट गरिदिनुस् । तपार्इँ कम्प्युटरसँग कार्डलाई कनेक्ट गरी माई कम्प्युटरमा गएर त्यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस र फ्याट ३२ मा फम्र्याट गर्नुहोस् यसले समस्या समाधान हुन्छ ।
कतिपटक मेमोरी कार्ड कम्प्युटर र मोबाइलमा कार्ड लगाउँदा देखाउछ तर भाइरस या सफ्टवेयरमा समस्याको कारणले कार्ड खुल्दैन । यस्तोमा सबैभन्दा पहिले कार्डमा कर्सर लैजानुुस र राइट क्लिक गर्नुहोस । यहाँ एक्सप्लोरको अप्सन पाइनेछ त्यसैमा क्लिक गर्नुहोस् । यसमा तल प्रोपर्टिजको विकल्प पाइने छ, त्यसमा जानुहोस । त्यहाँ एक ट्याब एन्ड टुल्स भन्ने हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस र चेक नाउ एररमा क्लिक गर्नुहोस् । सानोतिनो समस्या छ भने ठिक हुन्छ ।
यदि कार्ड देखाइरहेको छैन भने सबैभन्दा पहिले फोनलाई आफ्नो कम्प्युटरबाट सिस्टम म्यानेजरमा ओपन गर्नुहोस् । र डिस्क म्यानेजमेन्टमा जानुहोस् । यदि तपाईसँग विन्डोज १० छ भने माई पीसीमा राइट क्लिक गरेसँगै म्यानेजको विकल्प पाइनेछ, त्यसमा जानुहोस् ।
त्यहाँ तपाईँलाई पीसीमा उपलब्ध सबै डिस्कको लिस्ट देब्रेतर्फ आउनेछ । त्यहि दाहिनेतर्फ तपाइईलाई माइक्रोएसडी कार्ड देखिनेछ त्यसमा राइट क्लिक गर्नु पर्नेछ । यसमा तपाईलाई चेन्ज ड्राइभ लेटर एन्ड पाथको विकल्प मिल्नेछ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस । अब एक नयाँ विन्डोज खुल्नेछ । तपाईलाइँ त्यसमा एडको विकल्प मिल्नेछ त्यसमा क्लिक गरेर ड्राइभलाई कुनै अल्फाबेट नाम दिनुहोस् । तपाईले नाम दिँदा पीसी मा नभएको नाम दिनुपर्नेछ । यस लगत्तै कार्ड देखिन थाल्छ ।
यी विभिन्न विकल्पहरु अपनाउँदा पनि तपाईँको माइक्रोएसडी कार्ड प्रयोग गर्न सकिएन भने पक्कैपनि त्यो खराब भएको हुनुपर्दछ र तपाईँले नयाँ कार्ड किन्ने तयारी गरे हुन्छ ।